मनकामना माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, २० माघ शनिबार फेब्रुवरी ३ को राशिफल – Complete Nepali News Portal
मनकामना माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, २० माघ शनिबार फेब्रुवरी ३ को राशिफल
ScotNepal February 2, 2018
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल माघ २० गते शनिबार इश्वी सन २०१८ फेब्रुवरी ३ तारीख फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतिया तिथी चन्द्रमा सिंह राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछन् । सामान्य कार्य त्रुटिका कारण मानसिक समस्या उत्पन्न रहनेछ । पारीवारका सदस्यमा सामान्य स्वास्थ सम्वन्धि समस्या आईपर्नेछ । गरीरहेका कार्यको परीर्वतन गर्नु पर्न सक्ला । आम्दानि भने मध्यम रहन सक्नेछ ।
मनोरञ्जन का क्षेत्रमा ज्यादा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ । तपाईको मान सम्मानमा ठेस पुग्नेछ । पारीवारीक झोरझमेला ले सताउनेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ ।
परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला । सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ । प्रतिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । कार्यक्षेत्र सबल रहला । मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोग ले भाग्योदयको योग रहेकोछ । मन प्रशन्न रहनेछ ।
ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । खानपानको गडबढिले स्वास्थमा सामान्य असर रहला । सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन् । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ ।
भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । आटशाहसको बृद्यिहुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा भने सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । दाम्पत्य शुखमा बाधा पर्न सक्छ । मातृ पक्षमा कसैको स्वास्थमा सामान्य असर रहला ।
शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मित्र वा दाजुभाई बिच मनमुटाब हुन सक्छ। नेत्र सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सौदर्यका क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । अनावश्क यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ ।
आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । आक्समिक धनलाभ हुने योग रहेको छ । यात्रा आम्दानि मुलक रहन सक्छ । कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ । सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र परिश्रम खर्चिनु पर्ने छ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ ।
मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निँित सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला ।
तपाईको बोलिको कारण आफन्तजन हरु रुष्ट रहन सक्छन । नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ ।आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला ।
गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला ।प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ ।
सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ । तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रु सबल रहनेछन् । नयाँ लगानीको क्षेत्रमा बिशेष होस पुर्याउनु होला ।
नेपालमा पहिलो पटक डकुमेन्ट्री पन्चेबाजा गित
धर्तिमाताको पन्चेबाजा गित “बाजा तालैमा” भर्खरै
७ बर्षमै दुनिया चकित पार्दै गुल्मीकी